Rio de Janeiro - I LOVE RIO- KWEZOKUVAKASHA
Tourism Information and iseluleko ezinye the arcade izinkambo, uhambo, Kuzonyuka, nezinto omncane owaziwa emhlabeni muzi dalulwa ukuba izivakashi emzini. I LOVE Rio kuletha tips okuningiliziwe kanye ezikhethekile sendlela umhlabeleli ukujabulela zemvelo ezihlukahlukene - izintaba, amabhishi, amapaki, nokuningi. Kusukela ephelele photo ithuba, ukuze indlela engcono kakhulu yokusebenzisa usuku lina in Rio, kanye amakilasi kanye nokuvakashela.
Sezakhiwo Famous okuningi njengoba ingcebo ezincane cishe ezingaziwa bathola futhi ethulwa. Ulwazi okuningiliziwe kanjani ukufinyelela kunoma iyiphi ingxenye ye Rio, noma lapho ukuthola iziqondiso best, esinikezwa kulo lonke Portal.
umhlaba patrimony futhi eyiGugu
Umhlaba idume emabhishi alo, zomkhosi, futhi nomfanekiso yisakhiwo sodumo UKhrestu, Rio de Janeiro iyidolobha ocebile umlando, amasiko, amasiko, kanye nemvelo ukuthi uhambe kahle ngale eyaziwa. Ogwini langa, izintaba Monolithic, izimpophoma, amahlathi isetshenzwe zasemadolobheni, iziqhingi, ngisho namachibi kungaba yonke kungatholakala phakathi kwemingcele edolobheni laseRio sika.
Izinqaba Military, amasonto amahle, iminyuziyamu, izakhiwo zomlando, nasezikhungweni zamasiko ehlakazekile yonkana omakhelwane kakhulu ukuhluka omunye komunye, kulandiswe umuzi njengomuntu ocebile umphefumulo njengoba kuba ubuhle, nokuhlinzeka kwalokho esithakazelisayo eRio ngokwemvelo umbukwane.
Yethiwa by UNESCO emhlabeni patrimony futhi eyiGugu ngo-2012, isikhungo iyinikeza isihloko Rio de Janeiro kuqashelwa indlela ezehlukile izilungiselelo leli dolobha yemvelo hlangana ne esezithuthukiswe, futhi ngiqaphela ubuhle bayo ezihlukahlukene ezehlukile.
Ngaphezu siphakamise sezakhiwo eziningana wendawo ezifana uKristu sithombe, Copacabana beach, emasimini Botanical, lo Tijuca Forest, kanye izinqaba wezempi, UNESCO futhi waqaphela eziqhubekayo ugqozi wobuciko ukuthi Rio de Janeiro ahlinzekwe abaculi, abalungisa, futhi abaculi phakathi neminyaka.
I tendzawo edume kakhulu Rio kukhona kwesithombe UKhrestu, kanti Sugar Loaf - izimpawu yisakhiwo sodumo Rio de Janeiro cishe ngekhulu. Nokho, umuzi izici eziningi ezinye ezikhangayo, kanti hhayi njengoba odumile, kungaba nje ongenakulibaleka.
Umhlaba icon of Rio de Janeiro, imitha 30 okusezingeni Kristu sithombe umi phezu Corcovado Intaba, ngo Tijuca Forest National Park. Izivakashi ngifinyelele sithombe ngokusebenzisa zommbila panoramic futhi uvakashele yesonto esungulwe at the base of lesikhumbuzo.
Across kusukela sithombe, Right on kuvulwa Guanabara Bay, nokusukuma cishe 400 metres okusezingeni, intaba Sugar Loaf ingenye imibono isignesha ye Rio de Janeiro. Lokhu kumiswa esimangalisayo rocky unika bonke izivakashi ithuba for imibono omangalisayo futhi nakho. Intaba kungaba ukuhlola nasegqumeni layo Monolithic nezivakashi angahamba nge ikhebula imoto ilungelo esiqongweni sentaba, ngoba omunye ukubukwa Amazing kakhulu kuleli zwekazi, kuhlanganise imibono sendawo umuzi laseNiterói, UKhrestu and Copacabana beach - enye enkulu esiyingqopha emzini.
Omunye emabhishi wavakashela kakhulu emhlabeni, Copacabana beach siyikhaya a sipho ebanzi lokuphekiwe, imigoqo, izitolo, fashion boutiques, yeshashalazi, zemibukiso kanye imibukiso - with ukukhangana main lapha ukuba olwandle ezicacile blue and yonke imisebenzi kuvumela , ezifana zasemanzini beach ezemidlalo, ukugijima, ngebhayisikili, noma bamane sizipholele kwezihlabathi emihle futhi ejabulela ukubukwa.
Eduze, Ipanema enkabeni yonke Rio sika Deluxe - abathandwa izimbongi, abaculi kanye izigidi zezivakashi, kulendawo siyikhaya omunye emabhishi kunakho emadolobheni emhlabeni futhi indawo ezinye izitolo odumile kakhulu futhi bubuhle, boutiques nemipheme kuleli lizwe. Kuba indawo emangalisayo ukujabulela imibono, ezifana nentaba Morro Dois Irmãos, amanzi aluhlaza kanye enhle beach goers.
Akhiwe omunye ezindaweni kufinyeleleke kakhulu futhi touristy of Rio, is not wayevame Le ntaba Morro Dois Irmãos kodwa inikeza umbono omkhulu ezifundeni Ipanema futhi Leblon ngenkathi, ngokuqondile ngaphesheya kuwo, iziqhingi Cagarras enze for a nengxenye enkulu usuku tour futhi anikele umbono eyingqayizivele emzini. Leli qoqo, akhiwe ambalwa nje ukusuka Ipanema beach, liyindawo enkulu ukuvakashela e-search of a senzakalo close nemvelo kanye biodiversity eBrazil. Njengoba uyisiphephelo izilwane zasendle, kwezinhlobo eziningi zezilwane zasolwandle, kusukela amanzi noma emoyeni, kuyabonakala lapha.
Namuhla, abantu abangaphezu kwezigidi 1.6 ukuvakashela Rio ngonyaka, futhi ngesikhathi ezokuvakasha eRio de Janeiro iye yaphila iminyaka engaphezu kweyikhulu, yini ukhangwa izivakashi emzini savela ngendlela emangalisayo. Ekuqaleni, lo Sugar Loaf wayengekho kufinyeleleke nge ikhebula-imoto, lo sithombe uKristu akazange ezikhona Corcovado entabeni, futhi emabhishi babebhekwa njengabantu esiyingozi futhi kuphela esetshenziselwa zokugeza ezelaphayo. Izinto isiqiniseko zishintshile - kodwa, izindawo namanje eziningi ezimangalisayo ahlale cishe nhlobo izivakashi zanamuhla.
Abantu abavela emhlabeni wonke ukhangwa futhi enchanted ngengxube eyingqayizivele emabhishi, izintaba, amapaki, isiko kanye yokuphila, konke okuye abalobi izinhlobo eziningi art, izincwadi, izinkondlo nomculo.
Iminyuziyamu, zemibukiso kanye yeshashalazi sizungezwe i landscape ithatha amadlingozi lapho imvelo ihlangana muzi zasemadolobheni kanye ukukhalipha esiphawulekayo favelas. The uhlelo lamahhotela futhi ezindlini benza ukuhambela njengoba ukhululekile futhi ujabule, kanti ezihlukahlukene ongakhetha zokuthutha ukuvumela izindlela izivakashi eziningi lula lapho ngithola nekubona umuzi.
Ibhayisikobho phezu kwezintaba Rio omunye kungathatha e imibono esihle cityscape ezungezile awuthumbe interplay yayo textural - phakathi kwezintaba nolwandle, ihlathi nomuzi, high-rise ubukhazikhazi futhi favelas elikhulu - ngendlela kunzima ngeso lengqondo lisemhlabathini.
Sugar Loaf, Corcovado futhi Dois Irmãos kukhona phakathi lodumo kakhulu kulezi nemithambeka, kanti Pedra de Gávea inikeza uhambo kancane kanzima more abanemibono ebopha ngokulinganayo.
Tijuca Park kazwelonke ingenye amahlathi idolobha elikhulu emhlabeni, eseduze kakhulu inhliziyo Rio. Rich emagqumeni nasezindaweni ezinamadwala nezintaba amancane, sinikeza Kuzonyuka angalindelekile kanye ematsheni emaweni futhi emizileni ezifihliwe, okuvumela kuphumula ukujabulela waterfall noma bamangala nezilwane exotic, imivini ehlathini, silibangise enkangala ukwakheka rock and zasendle sendawo. Ibhayisikobho iziqongo zalo sezintaba izivakashi ungabona ububanzi omkhulu futhi ubukhulu ehlathini, amukele siyala panorama of the city ngezansi.
Rio enensada elihlukile expanses enkulu green, kuhlanganise amapaki umuzi, amahlathi kanye amapaki kahulumeni. Begudla ugu phakathi Botafogo futhi Centro kuyinto emkhathini aluhlaza ngokuthi "Parque ukwenza Flamengo," noma Flamengo Park. Large, imithi exotic agudle indlela lapho abantu bengatholakala khona egijima, ukuzivocavoca, ngezicathulo, ngebhayisikili, ehamba noma nje ukuphumula.
Ukuze emide Izihlahla nezinhlobo exotic, lo "Jardim Botânico," noma Botanical Garden, indawo ekahle. Wadala in 1808 umndeni wasebukhosini ogxile ukutshala izitshalo zokwelashwa kanye yezokwelapha, engadini kanye zokugcina izithombo manje ukudlala i Ukukhetha umxhwele ezihlukahlukene izitshalo aphethe - namakha Oriental, ezifana vanilla nesinamoni, imifino Portugal and Guiana, kanye nezitshalo, Izihlahla futhi cacti kusukela emhlabeni wonke.
I "Parque Natural Municipal de Marapendi," noma Marapendi Municipal Park, kufinyeleleke nge Western Zone of Rio, inikeza izivakashi uxhaxha imisebenzi, kuhlanganise izintaba, picnicking futhi edlala ku zokudlala. I "Lagoa de Marapendi," noma Marapendi Lagoon, elisendaweni esifundeni Barra da Tijuca amumethe imibono ebabazekayo, amanzi ecacile uxhaxha izinyoni nezilwane. Izivakashi ungakwazi ukujabulela isikebhe uhambo ebabazekayo echibini.
The Lagoon edume kakhulu muzi "Logoa Rodrigo de Freitas," owaziwa ngokuthi "inhliziyo Rio de Janeiro." Leli chibi izothile liyindawo enkulu ukujabulela imibono komuzi, kanye ukuzivocavoca futhi abenza zonke izinhlobo zasemanzini ezweni ezemidlalo. Ibhayisikobho iphakethe lesethulo, ukuze ngebhayisikili, ehamba, ukugijima noma abaqhuba yoga ilanga ukugeza, indlela ezungeze echwebeni linikeza ongakhetha eziningi uphumule futhi zifezeke, ejabulela izinsuku ngokuvamile fresh and elikhanyayo Rio.
Njengoba isikhumbuzi esiyigugu ocebile umlando, amasiko, kanye kwemvelo Rio de Janeiro, eziningi izinqaba wezempi ekucebiseni ogwini futhi ukufika emzini, kanye inqwaba amabandla futhi izikhumbuzo kulo lonke elakwa inqwaba izifunda.
Sesonto yisakhiwo sodumo futhi eyingqayizivele ngempela de São Sebastião ukwenza Rio de Janeiro liyikhaya ukholo zabantu Carioca kanye izinkulungwane zezivakashi abathola e design yayo imilingo, imivuzo imfihlo art nokukhanya kwelanga isakhiwo zesimanje kakhulu futhi obumangalisayo a. Famous for oluyindilinga yayo shape kanye zaveza ingilazi art in Amafasitela alo lapho hamba kusukela phansi kuya ophahleni ukwakha esiphambanweni, lokhu gem izakhiwo Itholakala isikhungo sezimali komuzi, lapho yakhoselisa umhlaba 70. With yokuma abantu 20,000, kungashiwo kalula livele njengoba lamathempeli ngobukhulu eNingizimu Melika.
Budebuduze, phakathi emabhishi Copacabana kanye Arpoador umi Copacabana Fort, ngesibindi ezibhekene Atlantic Ocean. Akhiwa ngo-1914, kule ndlu ahlomile esiqashwe ogwini Rio ize ingasebenzi zokuzivikela elingasogwini 1987, kodwa izivakashi namanje zibabaza amandla izindonga zayo kanye kwaqhuma Krupp ukuthi wasivikela. Namuhla isetshenziswa njengoba Museum of Army Umlando futhi unikeza izivakashi evela kubantu abathi elihle emabhishi futhi yonke bay, njengoba indawo yayo yayisendaweni ekahle abelethwe ukuba bengamele endaweni 360 ° umbono.
Enhle futhi ngokomlando okuphawulekayo "Parque Lage" emaphethelweni wesifunda Jardim Botânico kuyinto mlando key zomlando kusukela ngesikhathi ikoloni laseBrazil, futhi ekhaya ingadi enhle. The esigodlweni on emehlweni liveza ubuhle eyinkimbinkimbi okuqala 19 izakhiwo leminyaka, side by side nge art wesimanje kusukela "Escola de artes Visuais", iSikole of Arts Visual.
Rio de Janeiro iye yatuswa kula mashumi esidlule iqhaza layo emhlabeni wobuciko. Lokhu ngokwengxenye kubangelwa uhulumeni utshalomali zemibukiso kanye nemibukiso kulo lonke idolobha. I "Museu de Arte do Rio," noma Rio Art Museum, sivulwe 2013, futhi Kuqhutshwa nemibukiso esimnandi nezenzakalo unyaka. I "Museu de Arte Moderna," noma Museum of Modern Art, kanye "Centro Cultural Banco do Brasil," noma Bank of Brazil Cultural Center, futhi ukuhlela imibukiso omhlaba waqaphela unyaka.
Esinye isici repertoire Rio amasiko kuyinto inkundla yayo, kanye nokwazisa kabanzi yaseshashalazini. I "Teatro Municipal," noma Theatre Municipal ', ingenye izakhiwo kakhulu yesiteleka emzini. Akhiwa in the style baraque 1909, ngokuyinhloko liveza classical amakhonsathi, opera futhi ballets, kanye abanye yaseshashalazini musical.
Ebusuku-ukuphila Rio sika ngokupheleleyo unique futhi nokwamukela - ekwamukeleni zibe nesibaya yayo abantu bazo zonke bathanda, izizinda orientations. Ligcwele passion ukuphila, injabulo, umculo onohlonze a spectrum imibala, kanye bezinto.
Odumile ngoba arcs white eziphawula emnyango esifundeni Rio sika bohemian, futhi ekhaya izinyathelo egqamile tile ukuthi angene ezingomakhelwane Santa Teresa, Lapa ufana enye indawo emhlabeni. Nezitebele zamahhashi Colorful ukuthengisa Cocktails, ubhiya ukudla emgwaqweni pepper yokuhambahamba, kanti imigwaqo ngaphakathi imigoqo projecting onohlonze umculo wendabuko, ezifana Samba, forró futhi Funk.
Izikhungo zikanokusho eyinkimbinkimbi zingatholakala izifunda Copacabana, Ipanema futhi Leblon, kanti imigoqo nasezigcawini pepper kuzo zonke izindawo, babesha amashushu hhayi nje umculo happy lixoxa of izakhamuzi Rio sika.
Njengoba imboni sokufaka ezingabizi uye wanda e Rio, abanikazi baye bazikhandla ukuba enze izikhungo yabo njengoba ebukekayo futhi eyingqayizivele ngangokunokwenzeka. Avame ukudala i Ambience okuthakazelisayo, okuthuthukiswa communality imigoqo okwabelwana, amakamelo ophilayo futhi emakhishini.
Kukhona nabaningi okunethezeka indawo yokuhlala atholakalayo emzini. Ezinye amahhotela plushest zingatholakala ezifundeni imfashini Copacabana, Ipanema futhi Leblon, nokunikeza izivakashi gourmet cuisine, okubhukuda, nemishayo, saunas kanye nezinsizakalo massage.
Isikhonkwane Copacabana Palace kuba phezulu ohlwini lwamahhotela 5-star eNingizimu Melika, futhi nakanjani kumele-bheka eRio de Janeiro. It wavula iminyango zayo ukuba izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba ngo-1923, futhi kusukela ngaleso sikhathi iye sifakwe ezinye izivakashi abacebe futhi edume kunazo enhlokodolobha Carioca, ezifana Marilyn Monroe, Lady uDiana futhi Luciano Pavarotti, uma sibala ezimbalwa.
Kulabo ngokuvakashela Rio ibhizinisi, kukhona amahhotela eziningi stylish in the abasafufusa esifundeni commercial futhi zanamuhla komuzi, Barra de Tijuca. Kukhona ovumelana futhi angabizi ongakhetha hotel oluneziqhingi emhlabeni enkabeni yedolobha, futhi izifunda ukuthi bayamhaqa, ezifana Catete, Flamengo, futhi Lapa.
Enye kumnandi efulethini eziqashisayo. With the ukufika eziningana yimpumelelo kakhulu-line ibhizinisi, kuye kwaba yokwanda engakaze ibonwe kuleli hlobo holidaying. Izihambi bayakwazi ukukhetha emzini wabo ekhaya by ngokuqashisa amakamelo ahlobisa ngokugcwele futhi ethokomele amafulethi nezindlu.
Izithuthi zomphakathi round Rio de Janeiro owenza ingxenye yomuzi kalula. An ukuvakashelwa eyiqiniso eRio bekungeke kube ephelele ngaphandle kokuthatha ride omunye amabhasi fast-riding. Kungenjalo, ezitimeleni uyashesha futhi enokwethenjelwa futhi oyayo ethandwa kakhulu izivakashi izifunda emzini.
Liqashe ibhayisikili kungaba option mnandi kakhulu, ikakhulukazi uma libalele. Kukhona omuhle bike izindlela yonke egudle elula main of beach in Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Botafogo futhi Flamengo. Ngokufanayo, ezindleleni azungeze Rodrigo de Freitas Lagoon, ekahle elijabulisayo futhi olunothile ngamabhayisekili ride.
Kungakhathaliseki kungcono esheshayo, ride traffic-free ambalwa kulo lonke idolobha, noma uhambo indawo lokho esitolo, amatekisi ezivamile futhi ugibele moto-taxi amanye izindlela ezingcono kakhulu futhi esijabulisayo ukuze uthole umuzi.
Yachts futhi izindiza futhi zifundisa izindlela amadlingozi ukuzwa amanzi yisimaragidu Rio kanye neziqhingi ebabazekayo uthole imibono amahle eyingqayizivele panoramic of the cityscape. Rio inama omunye kakhulu umoya-ukungenisa kanye topographies eliyingqayizivele yimuphi umuzi emhlabeni - izintaba, emabhishi, amahlathi kanye ephezulu liphumele izakhiwo meld zibe omunye a fashion mesmerizing, ukunikela izivakashi imibono obumangalisayo kusukela cishe kunoma isiphi angle, futhi ungalokothi kangcono kunokuba kusukela ngenhla.
I LOVE RIO uzibophezele ekuhlinzekeni ethakazelisa kakhulu, kumnandi futhi ngamasiko akhuthazayo nesipiliyoni izivakashi leli dolobha. Portal abukhali ukwakha ukuxhumana obuqinile phakathi kwabathengi kanye namabhizinisi. Ngamunye isihloko ezihlobene ukusungulwa inkampani noma izivakashi osinikeza ukwaziswa okudingekile, kuhlanganise Iwebhusayithi, ikheli, inombolo yocingo kanye Amahora okuvula.
I LOVE RIO ungumthombo eyinhloko ulwazi izivakashi, esiza ekwenzeni noma iluphi kokuhlala e Rio smooth kanye kujabulise.